सलमानलाई छोडेर कार्तिक सँग रोमान्स गर्दै ज्याक्लिन ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > सलमानलाई छोडेर कार्तिक सँग रोमान्स गर्दै ज्याक्लिन !
सलमानलाई छोडेर कार्तिक सँग रोमान्स गर्दै ज्याक्लिन !
July 25, 2018 Bollywood
बलिउड फिल्म ईन्डष्ट्रिमा एक पछि अर्को दक्षीण भारतीय फिल्मको रिमेक बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अब यसै क्रममा अर्को एउटा दक्षीण भारतीय फिल्म किरिक पार्टी को नाम पनि आएको छ ।
केही समय पहिले यो फिल्म हिन्दी भाषामा कार्तिक आर्यन मुख्य अभिनेताको रुपमा छनोट भैसकेको समाचार प्रकाशीत भएको थियो । तर पछिल्लो समाचार अनुसार अब कार्तीक सँग अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नाड्डीजले रोमान्स गर्ने समाचार प्रकाशीत भएको छ ।
यो फिल्मको निर्माण पक्षले भने ज्याक्लीन र कार्तिकको जोडी निकै राम्रो सँग जम्ने बताएको छ । प्रायः सलमान खान सँग ज्याक्लीनलाई देखीरहेका दर्शकले यो फिल्म हेरीसकेपछि सलमान र ज्याक्लीनको जोडीलाई बिर्षिएर कार्तिक र ज्याक्लीनको जोडीलाई सम्झने दाबी गरेको छ ।
फिल्म किरिक पार्टीको निर्देशन राष्ट्रिय फिल्म अर्वाड बिजेता निर्देशक अभिषेक जैनले गर्दैछन् ।
यो फिल्ममा अभिनेता कार्तिक आर्यन दक्षीण भारतीय अभिनेता रक्षित सेट्टीले निभाएको भुमिकामा देखीदैछन् । तर ज्याक्लीनको भुमिकाको विषयमा भने निर्माण पक्षले अहिले सम्म कुनै खुलासा गरेको छैन् । किन कि यो फिल्ममा दुई जना हिरोईन रहेका छन् ।
फिल्म किरिक पार्टीमा दुई हिरोईनहरु रस्मिका मंदाना र संयुक्ता हेगडेले अभिनय गरेका छन् । निर्माण पक्षले ज्याक्लीनको भुमिकाको बिषयमा कुनै खुलासा नगरेपनि भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार ज्याक्लीन रस्मिका मंदानीले निभाएको भुमिकामा देखीने भएकी छिन् ।
यो फिल्मको छायांकन अक्टुबर देखी सुरु हुँदै छ ।